Buraannews.com » Family: Minn. Somali left to join al-Shabab Read more here
Midowga Yurub oo ku soo biiray canbaareynta loo jeedinayo Weerarkii lagu qaaday UNDP. Maraykanka oo weerarkii UNDP kadib sheegay in uu sii wadayo taagerida Dowlada Somalia. Golaha amaanka QM oo cambareeyay weerarkii shalay lagu qaaday Xarunta UNDP. Raisal wasaaraha Somalia oo mar kale loogu baaqay inuu is casilo. Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland oo ka hadlay dil doraad ka dhaxay Tuulada Xeebta ah ee Xariirad SOMALI LINKS
Family: Minn. Somali left to join al-Shabab Read more here
September 22, 2012 - Written by reporter1 - Edited byreporter1 MINNEAPOLIS — A Minnesota man recently traveled to Somalia to join al-Shabab, a spokesman for his family said, renewing fears that the terror group is continuing to recruit Somalis living in the U.S. to return to their homeland to fight.
Read more here: http://www.thenewstribune.com/2012/09/21/2304446/family-minn-somali-left-to-join.html#storylink=cpy
Midowga Yurub oo ku soo biiray canbaareynta loo jeedinayo Weerarkii lagu qaaday UNDP.June 20, 2013
Maraykanka oo weerarkii UNDP kadib sheegay in uu sii wadayo taagerida Dowlada Somalia.June 20, 2013
Golaha amaanka QM oo cambareeyay weerarkii shalay lagu qaaday Xarunta UNDP.June 20, 2013
Raisal wasaaraha Somalia oo mar kale loogu baaqay inuu is casilo.June 20, 2013